Simba rekushandisa uye kupisa kwakapisa muMac M1 ndiyo yakanyanya kunaka | Ndinobva mac
Iko kushandiswa kwesimba uye kupisa kwemafuta muMac M1 ndizvo zvakanakisa zvakaonekwa
Pakupera kwegore rapfuura Apple yakatanga chizvarwa chitsva cheMac ine processor nyowani, Apple Silicon uye itsva M1 chip. Kubva ipapo nhau hadzina kumira kubuda uye dzese dzakanakira idzi komputa nyowani. Tichifunga nezve hupenyu hwavanazvo mumusika, idzi inhau dzakanaka. Zvese zvinoratidza kuti kambani yekuAmerica yarova mbambo pamusoro. Ino nguva mushumo wakavakirwa pa manhamba ekushandisa kwesimba uye kupisa kwemafuta. Zvakanakisa zvakaonekwa kusvika pari zvino.
Iyo Mac nyowani ine yayo processor uye M1 chip, iri kuratidza kukosha kwavo pamuedzo wega wega wavari kuitiswa. Ikozvino uyu mubvunzo wekuyera iko kushandiswa kwesimba uye tembiricha kuburitsa kugona. Iwo manhamba akagovaniswa neApple kuburikidza neayo yepamutemo rutsigiro peji. Vamwe vaongorori vakadzidza izvi zviverengero uye semuenzaniso John Gruber (Anotya FireballTaura kushamisika kwavo nekugona kwekombuta iri pasi pekuedzwa.
2018, 6-musimboti Core i7 20 122 19.93 122.21
2014, 2-musimboti Core i5 6 85 5.86 84.99
Mune ino kesi iri Mac mini ine M1 uye zvimiro, izvo zvisiri kunyengedza, zvinonyevera kuti simba rekushandisa pazere simba rakaderera pane makomputa akafanana kubva makore mashanu apfuura ayo anga achimhanya chete Finder. Idanho rakakura, nekuti kwete chete iwo makomputa anofungidzira kuti ari nani mukuita asi, nekuda kwekugona kwavo kubvisa kupisa uye kuchengetedza bhatiri, vachava noupenyu hurefu. Chinhu chakakosha kwazvo kana uchisarudza kushandisa anopfuura chiuru euros pakombuta.
Saka iwe unotoziva. Dai iwe waive uine kukahadzika kwekutenga Mac neaya ma processor matsva uye Chip nyowani, usazeza. Ivo vanoita kunge vasina kana asina kusimba mapoinzi, kunyangwe ivo vachokwadi. Kune nguva dzose zviripo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » Mac Mini » Iko kushandiswa kwesimba uye kupisa kwemafuta muMac M1 ndizvo zvakanakisa zvakaonekwa
MacOS Big Sur 11.2 RC 3 yakaburitswa kune vanogadzira
Kutanga 27 "iMac yakagadziridzwa pawebhusaiti yeApple